testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့် (58-20-8) hplc≥99% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / testosterone အမှုန့်စီးရီး / testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့်
SKU: 58-20-8. Categories: testosterone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ testosterone Cypionate ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့် (58-20-8) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp)
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 98 - 104ºC
သိုလှောင်မှုကို Temp: 2-8ºC
အရောင်: အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင် Crystal Powder ချွတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့်သုံးစွဲမှု
testosterone Cypionate ပုံမှန်အားကာယဗလသို့မဟုတ် UGL ပိုင်ရှင်တွေအသုံးပြုပုံစမ်းသပ်ခြင်း Cyp, Cypionate, Depo-testosterone ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း testosterone Cypionate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
testosterone Cypionate (စမ်းသပ်ခြင်း cyp) အမှုန့်လေ့တခုထိုးသွင်းရေနံအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ စျေးကွက်မှာတော့ 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, အခြို့ UGL ပင် 350mg / ml နှင့် 400mg / ml ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုအနည်းငယ်လွန်းအားကြီးသောဖွစျလိမျ့မညျ
ကုန်ကြမ်း testosterone Cypionate အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အများဆုံးလူတို့သညျအဘို့အလွန်ကောင်းစွာသည်းခံဟော်မုန်းအဖြစ်, testosterone Cypionate ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများစွာရှိကြ၏။ ထိုသို့သောဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုမှကြွလာတဲ့အခါသူတို့အကြီးအကျယ်ဖြစ်နိုင်သော၏ဘုံသို့ရောက်ပါစေနှင့်မျှမတို့ဖွငျ့အာမခံနေကြသည်စိတျထဲတှငျစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါတောင်မှစုစုပေါင်းထိုး, မျိုးဗီဇနှင့်ကျန်းမာရေးသင့်ရဲ့ခြုံငုံပြည်နယ်တစ်ကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။
စမ်းသပ်ခြင်း cyp powder.Further ညွှန်ကြားချက်
testosterone Cypionate ထိုကဲ့သို့သောဝက်ခြံ, ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ပျတိုးအဖြစ် dihydrotestosterone (DHT) နှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်; သို့သော်သူက DHT steroids အဓိကတရားခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမပါဘဲသွားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်နှိမ်နင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင် DHT ပြဿနာကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် in-အလို့ငှာကာကွယ်မှုပေး, ထိုကဲ့သို့သော Finasteride အဖြစ် 5-alpha-reductase inhibitors အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမှတ်သားရမည်, ဆံပင်ကျွတ်အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်ဖို့ predisposed အမျိုးသားများတွင်သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း testosterone Cypionate အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ testosterone Cypionate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ယလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် testosterone Cypionate သုံးနေစဉ် AASRAW အတော်များများအားကစားသမားကြီးမားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအကျိုးအမြတ်ဖော်ပြရန်။
စမ်းသပ်ခြင်း cyp အမှုန့်ရော် Powder ချက်ပြုတ်နည်း
testosterone Cypionate တစ်ခု In-depth ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ကုန်ကြမ်း steroids Powder မှစ. ပြီးဆုံး testosterone Cypionate Make လုပ်နည်း
testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်: သင်အံ့သြဖွယ် steroids အကြောင်းကိုသိသင့်သမျှအရာအားလုံး !!!